I-Paint yeoli yokupeyinta i-Camera efihliweyo, ukurekhoda kwe-70hrs, ukuma kwe-100hrs, Ukurekhoda kokuFunyanwa kwe-Motion (SPY232D) | Izisombululo ze-OMG
I-OMG Elephant Paint Spyera Khamera efihliweyo, i-70hrs ukurekhoda, i-100hrs imile, Ukurekhodwa kweS Motion (i-SPY232D)
Umgcini wevidiyo ofihliweyo: Uncinci kakhulu kwaye ulula, Uncedise ikhadi le-TF ukuya kwi-32GB (Akufakiwe); Ukurekhoda inkxaso kunye nokushaja ngexesha elinye kunye nokurekhoda kwevidiyo.
Eziyimfuneko: Isisombululo seVidiyo: Inyaniso ye-HD 1280x720P, Zisa ividiyo eneenkcazo eziphezulu kunye nomgangatho womfanekiso. Malunga ne-30,000 mAh lithium ibhetri, ukurekhodwa kwevidiyo okuqhubekayo kweeyure ezingama-36 iiyure ezingama-48. Ukuqhagamshela kwifowuni / ithebhulethi / iPC ngokuthe ngqo ngokukhangela uphawu lwekhamera yeWiFi. Unokujonga ividiyo kwikhamera ngexesha langempela.
Ukwakhiwa ngaphakathi kwe-30,000 mAh lithiri ibhetri: ukurekhodwa okuqhubekayo ukuya kwii-36 iiyure kunye neeyure ze-48.
Ibhetri yeLithium: Malunga ne-30,000 mAh
8568 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-3 Namhlanje